महिलाहरुको अस्मितामाथि धावा बोल्ने कानुनमन्त्री तामाङको पद खोसियो ! — Sanchar Kendra
महिलाहरुको अस्मितामाथि धावा बोल्ने कानुनमन्त्री तामाङको पद खोसियो !
काठमाडौं । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको पद खोसिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कानुनमन्त्री तामाङलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ ।
उनले आजै मंगलबार दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गर्ने समेत स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्री तामाङले विज्ञप्ति जारी गर्दै माफी मागेर आफूले नेपाली विद्यार्थीहरुले भोग्नु परेको समस्यालाई उजागर गरेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका थिए ।
डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेका बेला कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि थपिएपछि नेकपाका नेताहरुले सोमबार साँझ छलफल गरेका थिए ।
बालुवाटारमा राति अबेरसम्म भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरुले मन्त्री तामाङलाई राजीनामा दिन सुझाएका छन् ।